Shiinaha warshad-dhamaadka Camshaft iyo alaab-qeybiyeyaasha | SAMUEL
Moodooyinka gawaarida la adeegsan karo: Volkswagen
tusaale: 038109101R / 038109101AH
Awoodda Saameynta: 1000 （mPa）
Qiyaasta xirmada: 500 * 20 * 20
Lambarka maqaalka: YD358A
Camshaftku waa qayb muhiim ah oo ka mid ah mishiinka waxayna ku xiran yihiin crankshaft iyada oo loo marayo silsilado ama suumanka (suunka waqtiga, silsiladaha waqtiga), camshaft waxaa wata gawaarida isla markaana sidoo kale kontaroolada furaha. Xiriirkani wuxuu xakameynayaa hawada isku dhafka shidaalka (nidaamyada duritaanka dhaqameed) iyo qiiqa qiiqa iyada oo la adeegsanayo qiyamka.
Wax soo saarku wuxuu ka samaysan yahay bir xoog leh oo dufan leh waxaana lagu daaweeyaa tikniyoolajiyadda xoojinta dusha sare si loo hagaajiyo awoodda daalka ee camshaftka. Waxay ku habboon tahay gawaarida, maraakiibta, gawaarida injineernimada, mashiinnada beeraha, koronto-dhaliye set tayada asalka ah, oo leh muuqaal wanaagsan, cufnaan sare, habsami, dhalaal iyo adkeysi kadib marka la dhammeeyo. Badeecad kastaa waxay soo martay tijaabooyin adag oo tayadeedana waa la damaanad qaaday. Baakadaha sanduuqa ayaa leh muuqaal wanaagsan iyo wareeg wax soo saar waara: 20-30 maalmood oo shaqo, baakado dhexdhexaad ah / baakado asal ah, qaab gaadiid: dhul, bad iyo hawo ah.
Camshaft wuxuu ku shaqeeyaa fure-yaashaan xargaha goolasha ku yaal laf-dhabarta camshaft laf ahaanteeda, maadaama ay ku wareegayaan hareeraha wiishka oo hoos u riixaya. Farsamooyinku waa guga oo la rakibo (waa la cadaadin karaa hawo dhaqaajin kartaa) waxayna ku noqon karaan meeshii asalka ahayd, iyagoo sugaya waqtiga xiga ee xargaha wareega wareega, iyagoo sii wadaya wareegga. Waxa ku yaal labada hawo iyo hawo-bixiyaha qiiqa iyo naqshadeynta mashiinnada qaarkood sida DOHC (labalabbo dusha sare) waxay yeelan karaan laba qaybood oo kala-goys ah halkii laga galo ama laga galo.
Waad qiyaasi kartaa in crankshaft-ku uu ku xiran yahay camshaftka iyada oo loo marayo kambaska, iyo kaamiladu waxay ku xiran yihiin bareeyaasha, dhammaantoodna waxay ku shaqeynayaan iskaashi. Inta lagu jiro xaaladaha caadiga ah ee hawlgalka heerka caadiga ah ee muuqaalka camshaft ayaa loo qaabeyn karaa astaamaha mashiinnada qaarkood, laakiin waxaa jira qiimeyaal is-bedbeddelaya oo xitaa beddeli kara muuqaalka kamaradda si loogu isticmaalo waxqabadka- Honda ayaa si gaar ah loogu yaqaannaa teknoolojiyada noocaas ah.
Ciladaha caadiga ah ee kaamaska ​​ayaa waxaa ka mid ah xirasho aan caadi ahayn, buuq aan caadi ahayn, iyo jabka. Xirashada iyo jeexjeex aan caadi ahayn ayaa badanaa dhacda ka hor inta aan dhawaaqa iyo jabka aan caadiga ahayn dhicin.
(1) Kaambuyuutarku wuxuu ku yaal meel u dhow dhammaadka nidaamka saliidda mashiinka, sidaa darteed xaaladda saliidda laguma rajo qabo. Haddii mashiinka saliida uu leeyahay cadaadis sahay ah oo ku filan waqtiga isticmaalka badan ama sababo kale, ama marinka saliida saliidda uu xiran yahay, saliida saliidda ma gaari karto kamshaftka, ama xaddidaadda xayiraadda ee xarkaha xirista ee adkeynta ayaa aad u ballaaran, saliidda saliidda ma geli karo farqiga camshaft ka. Waxay keentaa xirashada aan caadiga ahayn ee camshaft.
(2) Xirashada aan caadiga ahayn ee camshaftka ayaa sababi doonta in farqiga u dhexeeya camshaftka iyo guryaha lagu sido ay kororto, isla markaana barakicinta foosha ay dhici doonto marka camshaftu dhaqaaqdo, taasoo keenta buuq aan caadi ahayn. Xirashada aan caadiga ahayn waxay sidoo kale horseedi doontaa kororka farqiga u dhexeeya gawaarida gawaarida iyo tappet-ka. Marka kamaradda iyo taatikada hawo-qaadashada la isku daro, saameyn ayaa dhici doonta, taasoo keenta buuq aan caadi ahayn.
(3) Camshaftyada mararka qaarkood waxay leeyihiin cilado aad u daran sida jabka. Sababaha caadiga ah waxaa ka mid ah dildilaaca hawo-biyoodka ama dildilaac daran, saliid xumo daran, kaamab tayo liita, iyo jeex jeex jeex jeex jeex ah oo waqtiga ku socda.
(4) Xaaladaha qaarkood, cillad-darrada kaamshaftu waxaa sababa sababo aadanaha, gaar ahaan marka mashiinka aan si habboon loo kala jarin marka mashiinka la dayactirayo. Tusaale ahaan, markaad kala furfureyso daboolka weelka camshaft-ka ah, isticmaal dubbe si aad xoog ugu garaacdo ama aad u isticmaasho qalabka wax lagu kala riixo si aad cadaadiska u dul-dhigto, ama aad ku rakibto daboolka qaadista meel khaldan, sidaa darteed daboolku siduu u dhigmayo ma aha kursiga qaata, ama isku-xirka is-adkeynta daboolka wax lagu dhejiyo waa mid aad u ballaaran. Markaad rakibayso daboolka sita, fiiro gaar ah u yeelo fallaadhaha jihada iyo lambarrada booska dusha sare ee daboolka qaadista, oo waxaad u isticmaashaa birta xakamaynta si aad u adkeeysid daboolka adkeynaya daboolka si adag oo waafaqsan tiknoolajiyada la cayimay.
Gawaarida gawaarida oo tayo sare leh:
Moodooyinka gawaarida lagu dabaqi karo Volkswagen
tusaale 038109101R / 038109101AH
Awood saameyn 1000 （mPa）
Cabirka xirmada 500 * 20 * 20
Lambarka qodobka YD358A
Maaddadu waxay ka samaysan tahay bir xoog leh oo dufan leh waxaana lagu daaweeyaa tiknoolajiyada xoojinta dusha sare si loo hagaajiyo awoodda daalka ee camshaft. Waxay ku habboon tahay gawaarida, maraakiibta, gawaarida injineernimada, mashiinnada beeraha, tayada asalka ah, oo leh muuqaal wanaagsan, cufnaan sare, jilicsanaan, dhalaal iyo adkeysi ka dib dhammaadka. Badeecad kastaa waxay soo martay tijaabooyin adag oo tayadeedana waa la damaanad qaaday. Baakadaha sanduuqa ayaa leh muuqaal wanaagsan iyo wareeg wax soo saar waara: 20-30 maalmood oo shaqo, baakado dhexdhexaad ah / baakado asal ah, qaab gaadiid: dhul, bad iyo hawo ah.
Waxay ku habboon tahay baabuurta, maraakiibta, gawaarida injineernimada, mashiinnada beeraha, tayada asalka ah.
Hore: Madaxa silsiladda oo tayo sare leh
Xiga: Kala duwanaansho buuxa oo crankshaft gawaarida gawaarida ah